We Fight We Win. -- " More than Media ": "ရင်းနှီးစွာ အသိပေး ဖိတ်ကြားခြင်း"
"ရင်းနှီးစွာ အသိပေး ဖိတ်ကြားခြင်း"
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ် တဲ. ကိုဌေးကြွယ်ဟာ မတ်လ ၂၂ ရက်နေမှာ နယူးယောက်မြို.
ကိုရောက်ရှိလာ၍ နယူးယောက်မြိုမှ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများနဲ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း အောက်ပါအစီအစဉ်တိုင်း
ကြွရောက်ပါရန် လေးစားစွာဖြင် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်......
နေရက် _ မတ်လ ၂၂ ရက် (သောကြာနေ့ )
(လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပ်ရပ် နှင့် ပါတ်သက်၍
သိချင်သည့် အချက်အလက်များကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်)
ဆက်သွယ်ရန်၊ ၊နေတင်မြင့် (347-944-7341)